बाबुरामको चेतावनीः दमनले अवसान गराउने इतिहास दोहोरिन आँटेको हो ? - London Nepal News
बाबुरामको चेतावनीः दमनले अवसान गराउने इतिहास दोहोरिन आँटेको हो ?
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार १७:५९
माओवादी जनयुद्धका एक प्रमुख योजनाकारका रुपमा चर्चित डा. बाबुराम भट्टराईले विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्धित गरेको र दमनको तयारी गरेको कुराले विश्व इतिहासका केही चर्चित विडम्बनापूर्ण घटनाको सम्झना गराएको टिप्पणी गरेका छन् ।
फेसबुकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । आफ्नो टिप्पणीमा उनले यसो भनेका छन्ः
मार्क्सले हेगेललाई उद्धृत गर्दै भनेका थिए : ‘इतिहास दुइ चोटि दोहोरिन्छ-पहिलो चोटि वियोगान्त (Tragedy) रूपमा र दोश्रो चोटि मजाक (Farce) रूपमा!’
अाखिर त्यसको परिणाम के भयो? अन्तत: दुवै धारको भिन्न भिन्न प्रकारले अवसान भयो!
के नेपालमा पनि त्यही इतिहास दोहोरिन लागेको हो?
सरकार पूर्णरुपमा असफल भयो : रामचन्द्र पौडेल
ब्रेग्जिटः टेरिजा मेको दोस्रो ठूलो हार